Umaki: ukusimama | Martech Zone
Izitayela Zokuthenga Nokuthengisa Zabathengi zango-2021
NgoLwesithathu, ngoMashi 3, 2021 NgoLwesithathu, ngoMashi 3, 2021 Douglas Karr
Uma kukhona imboni eyodwa esabona ukuthi ishintshe kakhulu kulo nyaka odlule ibidayisa. Amabhizinisi angenawo umbono noma izinsiza zokusebenzisa ngokwamadijithali azithole eseyincithakalo ngenxa yokukhiywa phansi nobhadane. Ngokusho kwemibiko ukuvalwa kwezitolo kudlulele kwabangu-11,000 2020 ngowezi-3,368 kuvulwa izitolo ezintsha ezingama-XNUMX kuphela. I-Talk Business Nezepolitiki Lokho akuzange kushintshe isidingo sezimpahla ezihlanganisiwe zabathengi (CPG), noma kunjalo. Abathengi bangena ku-inthanethi lapho babene-
ULwesibili, April 23, 2019 ULwesibili, April 23, 2019 Douglas Karr
Usuku Lomhlaba bekuleli sonto futhi sibone ukuqhutshwa okujwayelekile kokuthunyelwe komphakathi lapho izinkampani zithuthukisa imvelo. Ngeshwa, ezinkampanini eziningi - lokhu kwenzeka kanye ngonyaka kanye nangezinye izinsuku babuyela ebhizinisini njengenjwayelo. Ngesonto eledlule, ngiqede umhlangano wokumaketha enkampanini enkulu embonini yezokunakekelwa kwempilo. Elinye lamaphuzu engiwenzile ngaphakathi komhlangano ukuthi inkampani yabo ibidinga ukumaketha kangcono